Off Off Shoulder လက်အရှည်ရှပ်ချည်ထိုးပန်းပွင့်အမျိုးသမီးများ၏ထိပ်ပိုင်း - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မရှိ | WoopShop®
Off Shoulder Sleeveless ဒီဇိုင်းချည်ထိုးထားသော Apricot အမျိုးသမီးထိပ်ပိုင်း - apricot / L backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အမျိုးအစားအမျိုးအစား: အင်္ကျီ, လက်မဲ့
မှတ်ချက် - ၁ လက်မ = ၂.၅၄ စင်တီမီတာ၊ ၁ စင်တီမီတာ ၀.၃၉ လက်မ၊ လက်ဖြင့်တိုင်းတာခြင်းသည် ၂-၃ စင်တီမီတာအမှားအယွင်းများကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။
ကောင်းသောအရည်အသွေးအလွန် fas ရေကြောင်းပို့ဆောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ ငါ့ကိုencantó! Muy lindo! más Comprare :)